Caalamka, 08 May 2019
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa maanta ku dhowaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista kaydinta macdanta Uranium-ka iyo biyaha culus, taasi oo qeyb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaas.
Qarax ka dhacay Lahore, Pakistan
Turkiga oo ku adkeystay inuu Ruushka ka iibsanayo S-400
Turkiga ayaa maanta sheegay in aysan ka laaban doonin go’aanka ay Ruushka uga soo iibsanayaan gantaalka casriga ah ee S-400, xittii haddii uu Mareykanka kusoo rogo cuna-qabateyn.
Israil xoojisay duqeymaha ay ku heyso Gaza
Dagaalyahannada ururka Hamas ee maamula magaalada Gaza ayaa Axadda maanta ah gantaallo kale ku ganay dhinaca Israel, iyadoo ciidanka Israil-na ay ku jawaabeen duqeymo cirka ah.
K. Woqooyi oo Gantaallo Cusub Tijaabisay
Madaxa shaqaalaha ciidanka K. Koonfureed ayaa sheegay in K. Woqooyi ay tuurtay gantaalo xiriir ah oo ay ka soo gantay magaalada bariga dalkaas ku taalla ee Wonsan, in yar ka dib 9 aroornimo ee xiliga dalkaas
Imaaraadka oo ka hadlay hadafka dagaalka Libya
Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Libya uu yahay mid xididada loogu siibayo argagixisada.
Israel ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay xalay weerareen dhisme miltari oo kooxda Xamas ay ku leedahay Marinka Gaza kadib markii buufinno sida bambooyin gacmo ku sameys ah looga soo weeraray.
Mareykanka iyo Israel oo cadaadis ku haya Falastiin
Israel iyo Mareykanka ayaa cadaadis dhaqaale saaraya maamulka Falastiin sababo la xiriira diidmadooda qorshaha nabadda Bariga Dhexe ee Mareykanka uu wado.
Daacish oo baahisay muuqaal ay ku sheegtay Al-Baghdadi
Kooxda Daacish ayaa Isniintii soo saartay muuqaal cusub, oo ay ku sheegtay inuu muujinayo hoggaamiyaheeda baxsadka ah oo farriin u diraya taageerayaashiisa.
IMF: Dhaqaalaha Iran wuxuu hoos u dhacayaa 6%
Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa saadaalinaysa in dhaqaalaha dalka Iran uu sanadkan hoos u dhici dooni 6%, ayada oo dalkaas uu wajahayo cadaadiska cunaqabateynta Mareykanka.